Tranganà Fanolanana Vehivavy Tao Delhi Nahatezitra Olona Nanerana An'i India	Voadika ny 28 Desambra 2012 8:18 GMT
Zarao: Vehivavy 23 taona iray no naboridana, novonoina ary naolana tao anaty fiara fitateram-bahoaka mbola eny am-pandehanana ny 16 Desambra 2012, izay hita fa henatra sy fahafaham-baraka ao India izany fihetsika mamoafady izany.
Soratra miverina: Voaolana? Raiso Ny Vola, Dia Mangina! Hoy Ny Polisy Indiana · Global Voices teny Malagasy	[…] ity, tahaka ilay tranga fanolanana tao Delhi niseho tamin'ny volana Desambra 2012 (jereo ny tatitra ao amin'ny global Voices [mg]). Nanamafy ny soritsoritra nataon'ny mpitsabo fa niharan'ny fanolanana feno […]
22 Avrily 2013, 21:35	Ajanony ihany
LalànaMediam-bahoakaVehivavy sy MiralentaZon'olombelona